Ngathi | component-xh.com
Yasekwa ngo-2001, siyinkokeli yeshishini egxile ekuboneleleni nzima ukufumana, ixesha elide lokukhokela, ukuphela kobomi (i-EOL) kunye nezinto ezingasasebenziyo zombane. Isebe lethu loqinisekiso lomgangatho kunye nelebhu yezindlu ziye zamkelwa njengenye yeenkokheli zeshishini zenkqubo yethu yokunciphisa yomgunyathi. Inkqubo yokuhlola esiyilandelayo kuyo yonke imveliso isekwe kwimigangatho yangoku yeshishini.
Emva kokusebenza kumzi mveliso wecomputer ozimeleyo iminyaka, u-CEO wethu-u-JC Lee waqonda ukuba uninzi lwabasasazi abazimeleyo bakhathalele eyona nto iphantsi kunelo lomgangatho wecandelo okanye ukoneliseka komthengi. Ngo-2000, u-JC Lee wabona imfuno ekhawulezileyo yomthengisi oqhutywa ngabathengi kwaye ngombono, wenza umhambisi onokuthi agxile kwiimfuno zabathengi ngelixa ebeka umgangatho kunye nokwoneliseka kwabathengi kuqala. Emva kweminyaka embalwa yokuhambisa i-niche encinci yamacandelo, uJC Lee wandise imveliso yethu kwaye waqalisa ukugcina impahla, ukufunxa kunye nokuhambisa amakhulu ezinto kubathengi kwihlabathi liphela.
Singumthengisi ozimeleyo wezinto ze-elektroniki, ezinikele ekudibaniseni iinkonzo zokuhambisa izixhobo ze-elektroniki zeemveliso ezidumileyo zehlabathi. Yasekwa ngo-Novemba 2010, ikomkhulu layo i-Hong Kong. Sikwanazo neendawo zokugcina iimpahla eHong Kong naseTai Wan.
Inkampani yethu ibonakaliswa liqela elikumgangatho ophezulu kwaye ishishini lenkampani yethu lisasazeke ngaphezulu kwamazwe angama-30 kuyo yonke imimandla yehlabathi. Ijelo elinyukayo lityebile kumenzi wokuqala kunye neearhente ezigunyazisiweyo. Amajelo asezantsi anezinto ezibonakalayo, ezenza ukuba ukwabiwa kolwazi lwempahla kuzaliseke kwaye sibambe olona lwazi luthengileyo nolona lubalulekileyo.
Iimveliso zethu kunye neenkonzo zibandakanya kuwo onke amacandelo oshishino lwe-elektroniki, kubandakanya ezomkhosi, ezemoto, ezonyango, ezomthengi zombane, ulawulo lweshishini, i-Intanethi yezinto, amandla amatsha, kunye nonxibelelwano, njlnjl Sinokunika iinkonzo kubathengi kuyo yonke imimandla, ukwabiwa okukuko, ukuncitshiswa kweendleko, ukubonelelwa kweenkonzo, ukulawulwa komgangatho, ukubonisana ngolwazi lweemarike, iinkonzo zokudityaniswa, kunye nokuhlaziywa kwempahla.
Ngomgaqo \_"wentembeko esekwe kubathengi, egxile kubathengi, ejolise kumgangatho, ejolise kumaxabiso, eqhutywa yinkonzo\_", siya kwenza konke okusemandleni ukubonelela abathengi bethu ngeemveliso neenkonzo ezilungileyo.
Siza kuhlala siphucula uthungelwano lokuthengisa lwenkampani kwihlabathi liphela, ukwenza ixabiso lokwenyani nelihlala lihleli kubathengi, kunye nokudala amathuba kubasebenzi, abanokubanceda ukuba bakhule ngokuqhubekayo. Sinethemba lokuba sinokuba liqabane lakho elifanelekileyo ekuhanjisweni kwamacandelo!